‘‘संस्कृति नै जोगिएन भने यो देश कसरी जोगिन्छ ? - नेपालबहस
नेकपा विवाद सल्टाउन दोस्रो तहका नेताको सक्रियता, कार्यविभाजनमा नयाँ बिन्दूको खोजी
होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेको सङ्ख्या बढ्दै, क्वारेन्टाइनमा बस्ने घट्दै
गृहपृष्ठ समाचार ‘‘संस्कृति नै जोगिएन भने यो देश कसरी जोगिन्छ ?
‘‘संस्कृति नै जोगिएन भने यो देश कसरी जोगिन्छ ?
काठमाडौं । सरकारले गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेपछि त्यसमा भएका कतिपय प्रावधानलाई लिएर विरोध भइरहेको छ ।
गुठी सम्बन्धी सरोकारवाला र नेवार समुदायले काठमाडौंमा गुठी सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरोकारवालाहरुको आन्दोलमा सरकारले धरपकड गरेको र आन्दोलकारीको टाउकोमा डन्डा वर्षाएको भन्दै संघीय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले चर्को विरोध गर्‍यो ।
सरोकारवालाहरु भने आफ्ना माग सुन्न सरकारलाई सडकबाट झक्झकाउन भने छोडेका छैनन् । बरु झनै आँटिला भएका छन् । उनीहरु नियमितजसो गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आफ्नो आवाज सुन्न सरकारलाई बाध्य पार्न झनै बुलन्द बन्न खोजेका छन् ।
उनीहरुको तर्क छ – ‘यदि गुठी विधेयक पारित भयो भने देशभरका ऐतिहासिक सम्पदाहरु मासिन्छन् ।’
उनीहरुको यो माग अहिलेदेखिको होइन । गायक समेत रहेका योगेश्वर अमात्य पनि गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले देख्दादेख्दै कति गुठीहरु मासिए, संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो मासिएका छन्, यसरी नै मासिँदै जाने हो भने भोलि हाम्रो संस्कृति के होला ?’
भूमाफिया र ईसाई मिशनरीको जालोमा गुठी विधेयक
प्रहरीले आइतवार माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका सरोकारवालामाथि पानीको फोहरा बर्साएको थियो । ‘खासमा हामीले माइतीघरमा पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियौँ तर प्रहरीले दमन ग–यो,’ अमात्य सुनाउँछन् ।
‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छौँ भनेर प्रहरीलाई भन्न चाहन्थ्यौँ, प्रहरी साथीहरुले पनि खुशी हुँदै हाम्रो फूल लिइदिनुभयो,’ योगेश्वर भन्छन् ।
उनको भनाइमा सरकारले गुठीको वास्तविकता ’bout बुझ्नै खोजेको छैन । आफूले १५ वर्षअघि नै गुठी संस्थान खारेज हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको पनि योगेश्वर सुनाउँछन् । ‘मैले उतिबेलै बुझेँ नि, संस्कृति जोगाउन त गुठी जोगाउनुपर्ने रहेछ ।’
संस्कृति मासिँदै गएको चिन्ता नेवार समुदायलाई मात्र होइन, अरु समुदायलाई पनि छ । ‘बराजुहरुले पूजाआजा र अन्य प्रयोजनका लागि गुठीलाई छुट्याए, अहिले भूमि सुधारले सबै गुठीलाई मास्ने विधेयक ल्यायो, धेरै नराम्रो भयो,’ अमात्य भन्छन् ।
पछिल्लो समय निरन्तर रुपमा गुठी विधेयकको विरोधमा खुलेर उत्रिएका छन् योगेश्वर । ‘हामीलाई एकदमै गाह्रो भयो, खासमा नेवार संस्कृति हाम्रो मात्र संस्कृति होइन, राज्यको पनि संस्कृति हो, धेरै गुठीहरु बिलाइसके, भएका गुठीमा पनि सरकारले अंकुश लगाउन खोज्दैछ,’ योगेश्वर भन्छन्, ‘धर्म नै रहने भने हाम्रो देश दलदलमा फस्छ, गुठी परम्परा हामीलाई जोड्ने आस्था पनि हो नि !’
योगेश्वर गुठीहरु जग्गा नभएको बताउँछन् । गुठीहरु समुदायको साझा सम्पत्ति हो । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले भू–माफियाहरुलाई जग्गा बेच्न सहज हुने गरी विधेयक ल्याउन खोजिएको उनी बताउँछन् र ‘सरकारले दमन गर्नु राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ, खासमा यो हाम्रो संस्कृति हो ।’
‘अङ्ग्रेजीमा गुठी भनेको ‘कम्युन’ हो, कम्युनिस्ट सरकार नै यसको विरोधमा गएको पटक्कै सुहाएन,’ उनी बहुमतको सरकारसँग गुनासो पोख्छन् । जनतालाइ भ्रममा राखेकाे र काम गर्न नसकेकाे बताउछन् ।
‘सरकारले राष्ट्रपतिको सवारी हुँदा घण्टौँ सडक जाम गर्छ, हामीमाथि पानी खन्याउँछ, आखिर हामी पनि यही देशका जनता हौँ नि !,’ योगेश्यर भन्छन्, ‘अब ४ गते माइतीघरमा झन् ठूलो विरोध हुँदैछ, अब त यो आन्दोलन रोकिन्छ झैँ लाग्दैन ।’
गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक
अघिल्लो लेखसबै लघुवित्त मर्जरका लागि तयार रहन गभर्नरको निर्देशन
अर्को लेखभूमाफिया र ईसाई मिशनरीको जालोमा गुठी विधेयक
पशुपति क्षेत्रमा प्रदर्शन,गुठी विधेयकका नाममा मौलिक सम्पदामाथिकाे आक्रमण
शिक्षा / स्वास्थ्य1961
मेडिकल कलेज / अस्पताल1437